Magaalaa Amboo keessatti meeshaaleen waraanaa 200 ol to’atame gabaasni jedhu soba jedhe Poolisiin magaalaa Amboo. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMagaalaa Amboo keessatti meeshaaleen waraanaa 200 ol to’atame gabaasni jedhu soba jedhe Poolisiin magaalaa Amboo.
Miidiyaaleen kunneen Ajajaa Poolisii Bulchiinsa Magaalaa Ambooti kan jedhan Komaandar Guutaa Leellisaa waabeffachuun meeshaaleen 200 ol qabamuu Tajaajilli Oduu Itoophiyaa gabaaseera jechuun gabaasan.
Haa ta’u malee Ajajaan Qajeelcha Poolisii Magaalaa Amboo Komaandara Itti aanaa Mulaatuu Alamuu waa’ee meeshaa waraanaa qabame jedhame kanaa quba hin qabnu jedhaniiru.
Kan nuti qabne shugguxii tokkoofi rasaasa shan akkasumas eeruu uummataatiin meeshaalee shiishaa 90 fi cuubeewwan adda addaati jedhan.
Akka gabaasaalee miidiyaa biyya keessaatti garuu shuugguxii 76, qawwee 138 fi cuubeewwan 35 sakatta’iinsa mana jireenyaafi kellaa irratti taasifameen akka qabame kan gabaafame.
Komaandar Guutuu Leellisaa waahila hojii isaanii akka ta’an kan himan Komandara itti aanaan Mulaatuu Alamu waa’ee meeshaalee waraanaa qabaman jedhamee gabaafamee akka ajajaa poolisii magaalaa Ambootti wanti quba qaban akka hin jirre BBC’tti himaniiru.
Maddi oduu gabaafamee maal akka ta’e adda baafanna jedhaniiru.
Hubachiisa: BBC Afaan Oromoo miidiyaalee biyya keessaarraa fudhachuun meeshaleen kunneen qabamuu gabaasee ture. Maxxansi kun erga ofii qulqulleeffanneen booda kan gulaalamedha.
OBN Ado. 2, 2011- Magaalaa Ambootti meeshaleen waraanaa seeran alaa 249 qabame.
Shawaa Lixaa Magaalaa Ambootti meeshaleen waraanaa seeran alaa qabamuu danda’uu poolisiin magaalattii beeksiseera.
Ajajaan poolisii magaalattii Koomandar Guuteen Lalisaa akka ibsanitti shuguxiin 76, qawween 138 fi cuubeen 35 kan qabaman tibba kana sakatta’insa mana jireenyaa fi buufata adda addaa irratti taasifameen ta’uu ibsaniiru.
kanatti dabalees meeshaleen shiishaa 90 qabamuu ibsaniiru.
Koomandar Guuteen Lalisaa akka ibsanitti, meeshaleen kunneen qabamuu kan danda’an eeruu ummata irraa isaan qaqqabeen ta’uu ibsaniiru.
Yakka waliin to’achuuf deeggarsa hawaasni taasiseef Koomandarichi galata dhiyeessaniiru.
Gabaasni kan Tajaajila Oduu Itiyoophiyaati.